त्यो बालापन,त्यो पायल चप्पल अनि त्यो डोली सावन » Nepali Mato
नेपालले मात्र होइन विश्वले यो समय निकै कष्टपूर्ण रुपमा कटाइरहेको छ । फुर्सद भए पनि नरमाइलो फुर्सदले कसैलाई पनि खुसी दिएको छैन । सरकारले कोहि पनि बाहिर निस्कन नपाउने गरि लकडाउन गरेको आज दुई हप्ता भन्दा धेरै भइसकेको छ । यो अवधिमा आफ्नो जन्म घर जान पाउनेहरु निकै भाग्यमानी हुन । सायद जीवनमै पहिलो पटक यसरी आफ्नो जन्म गाँउमा मानिसहरुले सबै भन्दा लामो समय विताउन पाएका छन र आफ्नो जिन्दगीको विगतलाई पुर्नताजकी गर्न पाएका छन ।
भुकम्पको बेला भरिएको गाँउ अहिले फेरी भरिभराउ जस्तै छ । यसो त छोरा छोरीले दुखमा सम्झीने भनेकै आफ्नो आमा हो आफ्नो गाँउ हो । सुखमा साथ दिने त साथीभाई छँदैछननी । आपतकै बेला भए पनि आफ्नो आमाको काखमा रहन पाउने सबै भाग्यमानीहरु हुन ।
जेल जस्तै एउटा कोठा भित्र थुनिएको ललितपुर शहरमा भौतिक शरिररहे पनि तनमन भने उडेर त्यहि देउरालीमा पुगेको छ । यो कठिन परिस्थितिमा मात्र गाँउ सम्झने ? यो पश्न सबैको मनमा उठ्यो होला तर कसमै खाएर भन्दा प्राय गाँउको माया र सम्झना सबैलाई आँउछ र मलाई पनि आँउनेनै भयो । सारै अत्यास लागे पनि गुगलअर्थबाट आज त्यो विरानो र रमाइलो देउराली हेरे । फोटोमै भए पनि ती डाँडा पाखा र खोलानालालाई देख्न पाँउदा निकै खुसी भएँ । जव गाँउका तस्विरहरु हेरे,अनि वालापन र विगतलाई गहिरोसँग सम्झीए त्यस पछि मेरा मनका कुरा यहि लेख मार्फत हजुरहरुलाई पनि शेयर गर्न गइरहेको छु ।
चरी हिमालमा,बुट्टा भर्दै छु जाले रुमालमा । यो गीत निकै गाइयो । यहि गीत गाँउदै पुमे हुँदै काभ्रे भिरमा बाख्रा खुव चराइयो । गाँउकै पशुपति बुबाले त मलाई उहाँ वित्नु भन्दा केहि बर्ष पहिला सम्म चरि हिमालमा भन्दै बोलाउनु हुन्थ्यो । उहाँले त्यसो भन्दा कताकता लाज र कताकता निकै खुसी लाग्थ्यो । उहाँ केहि बर्ष पहिला विती सक्नु भयो तर उहाँको सम्झना आज सम्म पनि ताजानै छ । केहि बालपनका त्यस्ता रमाइला क्षणहरु यहाँहरुमाझ साट्न चाहान्छु जुन तपाईहरु धेरैले भोग्नु भएको छ,कतिलाई नपत्याउन पनि सक्नुहुन्छ किन कि अहिले समय फेरीएको छ ।
हजुरहरुसँग झुट बोल्ने त कुरै भएन । यो डोली सावन भन्ने खासमा लुगा धुने कालो रंगको सावन हो । मैले त यो लुगा धुने सावनले १५ बर्ष सम्म नुहाएको हुम । जुन बेला म १० कक्षामा पढ्थे । लुगा धुने र नुहाउने सबै यहि डोली सावलेनै हो । अहिले यो सावन गाँउमा जाँदैन र आँउन पनि छोडेको छ तर वाल्यकालको सबै धुलो मैलो यहि सावनले फालेको हो । बेला बखत लाहुरेले ल्याएका बसाउने साबनले नुहाउन पाँउदा १ हप्ता सम्म शरीरै बसाए जस्तो हुन्थ्यो । त्यो बेला गरिवी एउटा कारण थियो भने चलन अर्को कारण थियो । कोहि कोहिले बाहेक सबैले यहि डोली सावनले नुहाउथे लगा धुन्थे ।
पायल चप्पल,बेटरीको विर्को र चाइनीज चप्पल
पायल चप्पल भने पछि सबैलाई आफ्नो फुटेका खुट्टा र त्यसमाथी पटपट पड्काउदै हिड्ने पायल चप्पलको निकै सम्झना आँउछ होला । कक्षा ४ देखि (त्यो भन्दा पहिला त खाली खुट्टा हिडिन्थ्यो ) यी चप्पल लगाइन्थ्यो र स्कुल गइन्थ्यो । हाम्रो समयमा नयाँ कक्षाको अध्ययन सुरु तीज पछिबाट हुन्थ्यो । ४ कक्षा देखि १० कक्षा सम्मको कुरा गर्ने हो भने करिव ७ जोली पायल चप्पल पड्काउदै सर्कुवा अध्ययन गर्न गइयो । बर्षको एक जोली चप्पल पाइथ्यो । निकै टाढा स्कुल जाने भएको हुँदा चाँडै फाट्थे चप्पल । यति सम्मकी चप्पलका तुना फुस्कीन थाले पनि एभ्रीडे बेटरीका विर्का चप्पलमा हालेर बाँकी दुई चार महिना गुजारा चलाइन्थ्यो । एक जोर चप्पल एक बर्ष । अहिलेका धेरै पाठकलाई यो कुरा हावा पनि लाग्न सक्छ जुन हाम्रो बास्तविकता हो । पायल चप्पलको रोश छदै गर्दा ५८ साल तीर बजार पिट्यो चाइनिज चप्पलले । एक समय प्राय सबैको खुट्टामा चाइनिज चप्पल परेकै हुन । पायल चप्पलको तुलनामा चाइनिज चप्पल त्यति टिकाउ नभए पनि खुव मार्केट पिटेको थियो । दुइ चार जोर यस्ता चप्पल पनि लगाइयो । आज काठमाण्डौमा बसेर राम्रा राम्रो चप्पल लगाइरहँदा पनि तीनै पायल चप्पल र चाइनिज चप्पलको निकै सम्झना आएको छ । पायल चप्पल अहिले पनि गाँउमा कसैले लगाएको पाइन्छ भने चाइनिज चप्पल त आउन छोडेका छन ।
पहिले पटक जूत्ता,पहिलो पटक क्यालकुलेटर
मैले माथीनै कसम खाएर भनिसकेको छु यो लेखमा भनिएका कुरामा एक रती पनि झुट छैन् । गाँउकै कसम खाएर लेख्न सुरु गरेको हुँदा पनि लेखेका कुरा सबै सत्य हुन भन्ने बुझीदिनु भो भने अझ रमाइलो हुने छ । तपाईहरुले पहिलो पटक जुत्ता कहिले लगाउनु भो कुन्नी ? मैले त पहिले पटक जुत्ता लगाएको २०६१ साल तीर हो । त्यो बर्ष दिदिको विहे हुँदै थियो । दुलहीको भाइ पायल चप्पलमा हुँदा राम्रो नभए पनि बाध्यताले जुत्ता पाइएको थियो । जुत्ता किनेर त ल्याइयो तर लगाउने भनेको दिदीको विहेको दिनमात्र हो । विहे आँउन भन्दा २ चार दिन पहिले जुत्ता किनीयो,मलाइ दिदिको विहे भन्दा जुत्ता लगाउने पिरलो थियो । बाँकी ती रातहरु जुत्ता लगाएकै सपनाले विते । आखिर त्यो दिन आयो,जुत्ता लगाउन पाइयो । कडा खालका पायल चप्पल लगाएका खुट्टाले एक्कासी नरम जुत्ता पाँउदा सगरमाथाकै शिरमा पुगे जस्तो भयो । अच्चमै खुसी लाग्यो । संसारकै सबै भन्दा राम्रो मान्छे मै हुम कि जस्तो पनि भयो ।
एस.एल.सी दिनपर्ने भए पछि मैले पहिलो पटक १० कक्षामा आँउदा क्यालकुलेटर पाएको हो । त्यो बेला कालो क्यासीयो भन्ने कम्पनीको क्यालकुलेटर खुव चलेको थियो । यो किन्ने भने देखि खुसीले निद्रा लाउन छोडेको किनेर ल्याए पछि एक हप्ता जति त खान पनि खाँसै मिठो भएन । गणितका एउटै हिसाव दुई पल्ट पनि गरियो क्याल्कुलेटर हान्न पाइन्छ भनेर । अहिले आफैसँग दुई दुई वटा ल्यापटप छन् कम्प्युटर छ तर त्यो खुसी पाइदैन । यस्ता खुसी केवल वाल्यकालमा मात्र पाइन्छन् ।
यो लेख लेखिरहँदा मैले पृष्ट भुमिमा विष्णु खत्री दाईको नयाँ जमाना भन्ने गीत सुनिरहेको छु र मलाई त्यहि क्यासेट बजाएर रमाएका दिनको याद भइरहेको छ । लाहुरेले छड्के टेप बोकेर घन्काउदै आएको याद आइरहेको छ । लडाईको लाहुँरे भन्ने गीतले त झन पुरै गाँउनै रुवाएको हो । त्यो गीत खुव सुनियो हाम्ले पनि । अहिले त साइली जमाना युउटुवको छ तर खुसी पहिलाको जस्तो पट्क्कै छैन ।
बाल्यकाल र गाँउको सम्झनाले एउटा लेख त के पुरै १० बटा किताव बन्छन् आजलाई यो भन्दा धेरै भयो भने पढ्न पनि दिक्क लाग्ला । बाँकी अर्को पटक क्रमश……………………………………………………।
३२ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:२६ August 17, 2019 Nepali Mato
१६ असार २०७६, सोमबार १९:०५ July 1, 2019 Nepali Mato
करिश्माको एसइइमा ‘बी प्लस’,शुभकामनाको ओइरो
१२ असार २०७६, बिहीबार १९:१५ June 27, 2019 Nepali Mato
रेशम चौधरीलाई १४ किलोको नेल र हत्कडी लगाइएको भन्दै बाबुरामको आक्रोश
७ असार २०७६, शनिबार ०७:३७ June 22, 2019 Nepali Mato
दाङमा चट्याङबाट तीन बालकको मृत्यु,एक जना घाइते
१० असार २०७६, मंगलवार २०:३४ June 25, 2019 Nepali Mato